Erotophobia kana kutya kuita zvepabonde nemumwe wako | Bezzia
Maria Jose Roldan | 11/01/2022 22:24 | Zvepabonde
Kunyange zvazvo zvingaita sezvinoshamisa uye zvisina kujairika, kune vanhu vanogona kutanga kutya kurara nemumwe wavo. Mhando iyi yephobia inozivikanwa nezita rekuti erotophobia uye inowanzoitika kubva pashoma kusvika kune yakawanda. Munhu anorwara ne phobia yakadai anotanga nekumwe kusachengeteka kana achinge arara nemudiwa uye nekufamba kwenguva kutya kuita bonde kunova kwakanyanya uye kunoonekwa.
Muchinyorwa chinotevera tichataura newe zvakadzama nezve phobia yebonde uye zvinokanganisa sei vakaroorana.
1 Erotophobia kana kutya zvepabonde
2 Chii chaunofanira kuita kana uine phobia yakadaro
Erotophobia kana kutya zvepabonde
Rudzi urwu rwe phobia kana kutya kune zvakawanda zvekuita nenguva yepedyo inobatanidzwa mukuita bonde nemudiwa, pane chokwadi chebonde pacharo. Munhu ane erotophobia anogona kuita bonyora pasina dambudziko, dambudziko rinomuka kana aita bonde nemumwe wake. Pane nhevedzano yezviratidzo zvinogona kuratidza kuti munhu ane phobia yakadai, sekunzwa kusagadzikana pakuita bonde nemumwe wako kana kuita zvikonzero zvekudzivisa nguva yakadaro. Iyo phobia inogona kuve yakakosha zvekuti munhu anogona kusarudza kusave nemudiwa.
Chii chaunofanira kuita kana uine phobia yakadaro
Munhu ari kutambura nerudzi urwu rwephobia anofanira kuziva nguva dzose, kuti kutya kwakadaro kunogona kukurirwa. Haisi chinhu chiri nyore kana chiri nyore kuita asi nechishuwo uye nemoyo murefu unogona kunakidzwa pabonde nemumwe wako zvakare. Heano mamwe mazano anogona kukubatsira kukunda kutya kwakadaro:
Kune vanhu vazhinji vanotambura nerudzi urwu rwephobia, Nokuti zvandaitarisira panyaya dzebonde zvaisaenderana nezviri kuitika. Kuti udzivise izvi, zvakanaka kuziva nezvese kusahadzika kungave kuripo uye zvinodikanwa kuenda kune nyanzvi yakadai seyezvepabonde.
Zvimwe zvinoshungurudza zvine chekuita nebonde zvinogona kuve chimwe chezvikonzero zvinowanzoitika zveerotophobia. Muchiitiko ichi zvakakosha kupinda mumaoko enyanzvi yakanaka kubatsira kugadzirisa dambudziko rakadaro. Kana iri trauma, Cognitive behaviour therapy yakakwana yekuisa matambudziko akadai kumashure kwako uye kunakidzwa nebonde nemumwe wako.
Bonde nemudiwa wako ngaive nguva yekunakirwa zvizere uye pasina kana chekutya. Zvakakosha kuziva nzira yekudzikamisa uye kuzorora musati masangana pabonde. Kuita zvepabonde kweTantric kunogona kubatsira kubvisa kutya uye kunakidzwa nenguva yese yevaviri.
Muchidimbu, nyaya yebonde phobia idambudziko rinobata chikamu chakakosha chenzanga. Kumwe kusachengeteka kana kushungurudza kubva kare kunowanzokonzera kutya kwakadaro kana zvasvika pakusangana pabonde nemumwe wako. Kuita zvepabonde nemudiwa hakufaniri kuonekwa sechinhu chakaipa uye kana sechinhu chinofadza kana chinogutsa. Kana nyaya yacho ichikura, zvinogara zvichikurudzirwa kuenda kune unyanzvi hwakanaka kuti ubatsire kugadzirisa kutya kwakadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Zvepabonde » Erotophobia kana kutya kuita zvepabonde nemumwe wako